mParticle: Angony sy ampifandraiso ny angona ho an'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny API azo antoka sy SDK | Martech Zone
mParticle: Angony sy ampifandraiso ny angona ho an'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny API azo antoka sy SDK
Zoma, Aprily 9, 2021 Zoma, Aprily 9, 2021 Douglas Karr
Mpanjifa vao haingana izay niara-niasa taminay dia nanana maritrano sarotra izay nametaka amina sehatra am-polony na mihoatra ny isa fidirana. Ny valiny dia fanatobiana taonina, olana momba ny kalitaon'ny data, ary fahasarotana amin'ny fitantanana fampiharana bebe kokoa. Na dia tian'izy ireo aza izahay manampy bebe kokoa, dia nanolo-kevitra izahay mba hamantatra sy hampihatra ny Sehatra ho an'ny mpanjifa (CDP) hitantanana tsara kokoa ny teboka fidirana data rehetra ao amin'ny rafitr'izy ireo, hanatsara ny fahamarinan'ny angon-drakitra, hanaraka ny fenitra mifehy, ary hanamora ny fampidirana ireo sehatra hafa.
mParticle Customer Data Platform
mParticle manana API matanjaka sy azo antoka ary mihoatra 300+ kit mpamorona rindrambaiko novokarina XNUMX+ (SDKs) hahafahanao mitantana mora foana ny angon-drakitry ny mpanjifanao, manaparitaka haingana ny fampidirana ary miantoka fa madio, vaovao ary manaraka ny fanarahan-dalàna. Manolotra ny sehatr'izy ireo:
Fifandraisana data - Angony ny angona misy API sy SDK azo antoka ary ampifandraiso amin'ireo fitaovana sy rafitry ny ekipanao. Midira amin'ny angon-drakitry ny mpanjifa ilainao raha tsy manahirana ny fitantanana kaody fahatelo. Ny fampidirana ireo rafi-doka, sehatry ny analytics, sehatra serivisy ho an'ny mpanjifa, rafi-barotra amin'ny rafitra ara-bola, sehatra fitantanana fanekena, ary sehatra fiarovana dia azo jerena mandritra ny fotoana maharitra SDK 300+. Azonao atao ny mandray ny angon-drakitra ao anaty vahaolana lehibe amin'ny trano fitehirizana antontam-baovao, ao anatin'izany ny Amazon Redshift, Snowflake, Apache Kafka, na Google BigQuery amin'ny fotoana tena izy. Na, mazava ho azy, azonao atao ny mampifangaro ny sehatrao amin'ny alàlan'ny API matanjaka ao aminy.
Ny kalitaon'ny angona - Hatsarao ny kalitaon'ny data an'ny mpanjifanao ary apetraho tsara ny angona data amin'ny alàlan'ny fandaminana, fitantanana ary fanamarinana ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa alohan'ny hizarana azy amin'ireo rafitra any ambanin'ny tany.
Data Governance - Tantano ny fanajana ny lalàna momba ny tsiambaratelo momba ny tsiambaratelo ary tohano ny filàna fitantanan'ny orinasanao. Arovy ny tsiambaratelon'ny mpanjifanao amin'ny alàlan'ny localization data, ny fanarahan-dalàna CCPA, ny fangatahana lohahevitra GDPR, ny fitantanana ny fanekena GDPR, ny fiarovana ny angona PII, ary tantano ny fanarahan-dalàna sy ny fanekena OneTrust.
Personalization-Driven Personalization - Mamorona traikefa manokana amin'ny alàlan'ny angon-drakitry ny mpanjifa ara-tantara sy tena izy. Mamorona mpihaino, manisa toetra, mombamomba ny mpampiasa omnichannel ary ampiasaina LiveRamp hanomezana traikefa ho an'ny mpanjifa manokana.
Mifandraisa amina manam-pahaizana mParticle hiresahana ny fomba fampidirana sy fandaminana ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa amin'ny fomba mety amin'ny orinasanao.
Jereo ny fampidirana mParticle rehetra Jereo ny Demo mParticle
Tags: Fampidirana AdTechfampidirana dokambarotraAmazon Hafaingana radialafampidirana analyticsApache KafkaAPIfampiharana interface tsaraautomatiquelehibecdpangona ho an'ny mpanjifadata an'ny mpanjifa apiSehatra ho an'ny mpanjifafampidirana serivisy ho an'ny mpanjifafampidirana sehatra fitantanana angonafampidirana trano fitahirizana datafampidirana serivisy ara-bolaGoogle BigQuerymParticleBohabohan'orampanalakitapo mpamorona rindrambaiko
Ny olana momba ny Build Versus Buy Buy: 7 hevitra ho an'ny fanapahana izay tsara indrindra amin'ny orinasanao
Ahoana ny fomba fananganana kolontsaina tarihin'ny angon-drakitra hampitomboana ny tsipika ambany an'ny orinasanao